Major William Sa Lian Zam (ချင်းလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် စစ်ဦးစီးချုပ်) နှင့် ချင်းဒီမိုကရေစီပါတီ၊ ချင်းလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်၏ တော်လှန်ရေးသမိုင်း (အပိုင်း ၂) - Chin World
Home Article Major William Sa Lian Zam (ချင်းလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် စစ်ဦးစီးချုပ်) နှင့် ချင်းဒီမိုကရေစီပါတီ၊ ချင်းလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်၏ တော်လှန်ရေးသမိုင်း (အပိုင်း ၂)
အပိုင်း (၁) မှအဆက်
ပါလီမာန်ဒီမိုကရေစီပါတီဥက္ကဌ ဦးနုမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုမှ နုတ်ထွက်ခြင်း
ညီညွတ်သောအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်ပေါင်းစု (NULF) သည် PDP, KNU, NMSP တို့နှင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ၁၉၇၀ ခုနှစ်တွင် CDP စတင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဘက်တွင်လည်း မဟာမိတ်အဖြစ် ပြည်ချစ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (PLA)၊ ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (KNLA)၊ မွန်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (MNLA) နှင့် ချင်းလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (CLA) တို့ပါဝင်ကြသည်။ မဟာမိတ်သက်တမ်းအတွင်း ပြသနာမျိုးစုံနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြသည်။ အမှန်စင်စစ် ဦးနုတို့အဖွဲ့ နှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များ မဟာမိတ်ဖွဲ့နိုင်သည့်အကြောင်းရင်းမှာ မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာတွင် သဘောတူကြခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲ ဦးနု၏အဖွဲ့ ငွေရေးကြေးရေး အင်အားတောင့်တင်းသည့် အတွက်ကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ မဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပြီးနောက် ဗမာလူမျိုး ပြည်ချစ်တပ်မတော်မှ တပ်သားများ KNU ရှေ့တန်းစခန်းသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ကြသည့် အချိန်တွင် တစ်ဦးနှင့်အတစ်ဦး အယုံကြည်မရှိခဲ့ကြသဖြင့် ရှေ့တန်းတွင် ပြသနာနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရသည်။ KNLA တပ်သားများမှလည်း ၎င်းတို့ သွေး၊ချွေးနှင့်ရင်းပြီးကာကွယ်ခဲ့ရသည့် နယ်မြေများ ပြည်ချစ်တပ်မတော်မှ မြန်မာတပ်သားများထံသို့ လွှဲပေးရမည့် အဖြစ်မျိုးလက်မခံနိုင်ခဲ့ကြချေ။ ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်ဘက်တွင် အယူဝါဒကွဲပြားမှုများကြောင့် မဟာမိတ်အဖြစ်ရပ်တည်ရန် တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ ခက်ခဲလာခဲ့သည်။ မဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းသည့်အချိန်တွင် မဟာမိတ်မူ၊ ပေါ်လစီအရ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ထောင်ရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော် မွန်ပြည်သစ်ပါတီမှ မွန်ပြည်နယ်တောင်းခံရာတွင် ပါလီမာန်ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင်များဘက်မှ ဝေဖန်မှုများထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ဦးနုသည်လည်း တော်လှန်ရေးနယ်မြေ ရှေ့တန်းစခန်းသို့ သွားရောက်ခြင်းမရှိဘဲ ဘန်ကောက်တွင်သာ နေထိုင်ခဲ့သည့်အချက်ကြောင့် ဝေဖန်မှုများထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ မဟာမိတ် ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များနှင့် စစ်ဗိုလ်များသည် ငွေရေးကြေးရေး သုံးဖြုန်းနိုင်ကြပြီး အောက်ခြေစစ်သားများသည် အခက်အခဲမျိုးစုံနှင့် ဆင်းရဲဒုက္ခများ ရင်ဆိုင်ကြရသည့်အဖြစ်ကြောင့် အောက်ခြေစစ်သား နှင့် စစ်ဗိုလ်အရာရှိများအကြား တင်းမာမှုများလည်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်း ဦးဆောင်သည့် မြန်မာအစိုးရမှလည်း ဦးနုထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်ပြီး မြန်မာအစိုးရအား တော်လှန်ရေးလုပ်သည့်အတွက်ကြောင့် ထိုင်းအစိုးရကို ဖိအားပေးမှုများရှိခဲ့သည်။
👉ဗိုလ်ကြီးထန်းလှယ်မန်း (Pu Michael Mang Kham)
👉ဗိုလ်ကြီးဒေနီယဲလ်ထန်လျန်း (Pu David Thang Za Pau)
ချင်းမျိုးချစ်စခန်း (Phundawt Camp)
Courtesy Photo of Captain Lian Thang
KNU ဥက္ကဌကြီး ဦးမန်းဘဇံ ခေါင်းဆောင်သည့် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးမှလည်း ဦးနုထံသို့ ဖက်ဒရယ်မူ နှင့် ခွဲထွက်ခွင့်မူ များကို တောင်းဆိုလာကြသည့် အချိန်တွင် ဦးနုဘက်မှ လိုက်လျောမှုမပြုနိုင်ခဲ့ချေ။ မဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းသည့်အချိန်တွင် စစ်မှန်သည့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု (Federal Union Republic) တည်ထောင်ရန် ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်များ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသော်လည်း ထိုသဘောတူညီချက်အရ ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်မည့်မူများအား တော်လှန်ရေးနယ်မြေသို့ ချမှတ်သည့်အချိန်တွင် ပြသာနာများဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။ KNU တပ်သားများအနေဖြင့် အကယ်၍ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကို လက်ခံပြီးသည့်တိုင်အောင် ၎င်းတို့တိုက်ပွဲဝင်တောင်းဆိုသည့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး (The Right to Self Determination) နှင့် ခွဲထွက်ခွင့် (The Right to Secede) စသည့်အချက်များ လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးမည့်အချက်ကို လက်မခံနိုင်ခဲ့ကြချေ။ KNU နှင့် MNLA အတွင်း၌လည်း မကျေနပ်ချက်များ ထွက်ပေါ်လာခဲ့သောကြောင့် မဟာမိတ်မူတွင် ခွဲထွက်ခွင့်အား ဦးနုတို့အဖွဲ့အနေဖြင့် လက်ခံရန် ဖိအားပေးတောင်းဆိုလာခဲ့သည်။ PDP/PLA အနေဖြင့် တော်လှန်ရေးခရီအတွက် တိုင်းရင်းသားတို့၏ တော်လှန်ရေးနယ်မြေသည် အဓိကအချက်ဖြစ်သောကြောင့် မဟာမိတ် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တို့၏ တောင်းဆိုမှုများအား လိုက်လျောရန် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးလက်ျာ နှင့် အခြားထိပ်သီးခေါင်းဆောင်များ ဆန္ဒရှိကြသည်။ သို့သော် ဦးနုက KNU အဖွဲ့ တောင်းဆိုသည့် ခွဲထွက်ခွင့်မူကို လက်ခံရန် ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ KNU နှင့် NMSP တို့မှ ထပ်မံဖိအားပေးရာ မဟာမိတ်အနေဖြင့် ခွဲထွက်ခွင့်မူ (The Right to Secede) အား ၁၉၇၂ ခုနှစ် ဧပြီလ တွင်လက်ခံခဲ့ကြသည်။ ဦးနုသည်လည်း “ခွဲထွက်ချင်တဲ့သူတွေနေခဲ့” ဟုဆိုကာ မဟာမိတ်မှ နုတ်ထွက်ခဲ့သည်။ ထိုစဉ် ထိုင်းအစိုးရအာဏာပိုင်များမှလည်း ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှ ထွက်ခွာရန် ဖိအားပေး ပြောကြားခဲ့ကြသဖြင့် ဦးနုသည် ၁၉၇၃ နှစ်ဦးပိုင်းတွင် အမေရိကန်သို့ ခွင့်ကာလရှည်ယူပြီး (Sabbatical) ထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီးနောက်တွင် အိနွိယနိုင်ငံသို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့သည်။ ဦးနု ထွက်ခွာသည့်နောက်ပိုင်းတွင် ဗိုလ်လက်ျာ မှ တော်လှန်ရေးအား ခေါင်းဆောင်ခဲ့သည်။ သို့သော် တော်လှန်ရေးအစပြုသူ၊ တော်လှန်ရေး၏ အဓိကကျောရိုးဖြစ်သူ၊ တော်လှန်ရေးအတွက် အဓိကအဖြစ် ငွေရေးကြေးရေး ရှာဖွေသူ ဦးနုနုတ်ထွက်သည့် နောက်ပိုင်းတွင် ညီညွတ်သောအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်ပေါင်းစု (National United Liberation Front) သည်လည်း ပြိုကွဲရေးဘက်သို့ ဦးတည်လာခဲ့သည်။
ချင်းလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်၏ ရှေ့တန်းတိုက်ပွဲများ (၁၉၇၃)
၁၉၇၃ ခုနှစ် ဇန်နာဝါရီလကုန်တွင် ချင်းလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်မှ ဗိုလ်ကြီးဘမြင့် (Lam Kang) ဦးဆောင်သည့် တပ်သားတစ်ချို့သည် KNU တပ်မဟာ ၇ ဒေသရှိ ရှေတန်းစခန်းတွင် ပထမအသုတ်အဖြစ် ချီတက်ခဲ့ကြသည်။ မဟာမိတ်အတွင်း အခြားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များနှင့် ယှဉ်လျင် ချင်းတပ်ဖွဲ့သည် အင်အားနည်းသောကြောင့် ချင်းတပ်ရှိမှန်းပင် ရှေ့တန်းရောက် စစ်သားများမှ မသိခဲ့ကြပေ။ မေလ ၄ ရက်၊ ၁၉၇၃ တွင် စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်မှူးဝီလီယံဆာလျန်ဇမ်း နှင့် တပ်အင်အား ၅၀ တို့သည်လည်း ရှေ့တန်းတွင် ချီတက်ခဲ့ကြပြီး ဗိုလ်ကြီးဘမြင့် (Lam Kang) ခေါင်းဆောင်သည့်တပ်ခွဲနှင့် ပူးပေါင်းခဲ့ကြသည်။ ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့ ၁၉၇၃ နံနက် ၁ နာရီ မှ နံနက် ၉ နာရီအချိန်ထိ ဗိုလ်မှူးဝီလီယံခေါင်းဆောင်သည့် ရှေ့တန်းရောက် ချင်းလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်သည် ဗဟိုအစိုးရတပ်နှင့် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ထိုတိုက်ပွဲအကြောင်းကို ဗိုလ်ကြီးလျန်ထန်း (Captain Lian Thang) ၏ မှတ်တမ်းထဲတွင် “ချင်းတပ်ဖွဲ့သည် ဗမာ့တပ်မတော်၊ ခြေလျင်တပ်ရင်း (ခ.လ.ရ) ၁၉ လက်အောက်ခံ အမှတ် (၅၈) တပ်ရင်းနှင့် ၁၉၇၃ ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့ နံနက် ၁ နာရီ မှ နံနက် ၉ နာရီအချိန်ထိ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဗမာ့တပ်မတော်ဘက်မှ ၃၅ ဦးကျဆုံးပြီး လက်နက် နှင့် အရေးကြီးသည့် စာရွက်စာတမ်းများကို မိမိတို့သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သည်ဟု ရှေ့တန်းရောက် ဗိုလ်မှူးဝီလီယံမှ လိုင်မီးစခန်းသို့ ကြေးနန်းပို့လာခဲ့သည်” ဟုတွေ့ရှိနိုင်သည်။
ထို့နောက် ဗိုလ်ကြီးလျန်ထန်းပါဝင်သည့် ချင်းတပ်စိတ်သည်လည်း ရှေ့တန်းသို့ ချီတက်ခဲ့ကြပြီး ထိုအချိန်မှ ၁၉၇၄ ဇွန်လ အကြား ဗမာ့တပ်မတော်နှင့် တိုက်ပွဲ ရှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ထိုအကြောင်းကို ဗိုလ်ကြီးလျန်ထန်း၏ မှတ်တမ်းထဲတွင် “ဗိုလ်မှူးဝီလီယံတို့ တိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း ချင်းတပ်နာမည်ရလာတယ်။ အဲဒီတိုက်ပွဲအပြီးမှာ ကျွန်တော်တို့အသုတ်တွေ ရှေ့တန်းရောက်လာကြတယ်။ မဟာမိတ်တွေကလည်း ချင်းတပ်ရှိမှန်း သိလာခဲ့ကြတယ်။ မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေ စိတ်လှုပ်ရှားတက်ကြွလာကြပြီး ပဲခူးရိုးမရှေ့တန်းတွင် စခန်းချတဲ့ ဗိုလ်ဖိုးမြ နှင့် ဗိုလ်မေရီအုန်း နှင့် ပြည်ချစ်တပ်မတော်မှ ဗိုလ်မှူးအောင်မြင့် တို့ဦးဆောင်တဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ ပူးတွဲ စစ်ဆင်ရေး ဆင်နွှဲခဲ့ကြတယ်။ ကျွန်တော်ရှေ့တန်းရောက်ပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်း ကျွန်တော်တို့ KNU နယ်မြေကနေ မဆုတ်ခွာမီအချိန် (၁၉၇၄ ဇွန်လ) အထိဗမာ့တပ်မတော်နှင့် တိုက်ပွဲရှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။ ဗိုလ်မှူးဝီလီယံတို့ တိုက်တဲ့ တိုက်ပွဲနဲ့ဆိုရင် ချင်းလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နဲ့ ဗမာ့တပ်မတော်တိုက်တာ ကိုးကြိမ်ရှိတာပေါ့။ မဟာမိတ်ဘက် ဗိုလ်ဖိုးမြ နှင့် ဗိုလ်မေရီအုန်း နှင့် ပြည်ချစ်တပ်မတော်မှ ဗိုလ်မှူးအောင်မြင့် တို့တပ်ဖွဲ့ထဲမှာတော့ ကျဆုံးတဲ့သူတွေများတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ချင်းလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ထဲမှာတော့ ဗိုလ်ကြီးတစ်ယောက်နဲ့ တပ်ကြပ်ကြီးတစ်ယောက်ဘဲ ဒဏ်ရာရတယ်” ဟုတွေ့ရှိနိုင်သည်။
ချင်းလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် ရှေ့တန်း (KNU တပ်မဟာ ၇ နယ်မြေ) မှ ဆုတ်ခွာခြင်း
PDP/PLA/UNLC မှ ဦးနု နှုတ်ထွက်ခဲ့သည့်နောက်ပိုင်း မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုအတွင်း၌ ပြသနာမျိုးစုံ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ ဦးနုကို အားကိုးပြီး တော်လှန်ရေးထဲသို့ လိုက်လာခဲ့ကြသည့်သူများ ဦးနုမရှိတော့သည့်အခါ တော်လှန်ရေး အောင်မြင်နိုင်မှု ရှိနိုင်မည်မဟုတ်သည်ကို သိရှိကြပြီး တပ်မှ ထွက်ပြေးသူများ တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ များပြားလာခဲ့သည်။ ချင်းလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် အတွင်း၌လည်း တပ်မှ ထွက်ပြေးသူများ၊ ချင်းတပ်မှ အခြားတပ်သို့ ပြောင်းရွှေ့သူများကြောင့် ၁၉၇၃ ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင်မူ တပ်အင်အား ၁၅၀ ကျော်မှ ၁၀၀ ၀န်းကျင်သာ ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ ချင်းလူမျိုးထဲမှာလည်း ချင်းဒီမိုကရေစီပါတီဝင်များဖြစ်ကြသော Pu David Thang နှင့် Pu No Kap Thang တို့သည်လည်း ပါတီမှ နှုတ်ထွက်သွားကြသည်။ ဦးမန်တလင်း (Pu Mang Tling) နှင့် ဗိုလ်ကြီးလျန်ထန်းတို့ နှင့်အတူ မတူပီမှထွက်လာခဲ့သည့် ဗိုလ်ကြီးပေါလ်ရဲအောင် (Captain Paul Ye Aung aka Paul Khei Chai) သည်လည်း ချင်းတပ်မှ ၁၉၇၃ နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် နှုတ်ထွက်ခဲ့ပြီး မြန်မာပြည်ကာ အလင်းဝင်ခဲ့သည်။ ချင်းလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်သည် ရှေ့တန်းတွင် ၁၉၇၄ နှစ်လယ်ပိုင်းအထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသည်။ ၁၉၇၄ ဇွန်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် KNLA ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မြထံမှ ချင်းတပ်သို့ ကြေးနန်းတစ်စောင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး ဗိုလ်ချုပ်မြမှ ချင်းတပ်အား ဗိုလ်မှူးကြီး ကလက်စတုန်း (Colonel Glad Stone) ဦးဆောင်သည့် စစ်ကြောင်းနှင့် ပူးပေါင်းပြီး ရှေ့တန်းတွင် စစ်ဆင်ရေး ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း KNU နှင့် PDP/PLA အကြား ဆက်ဆံရေးပျက်ပြားခဲ့ပြီး KNU မှ ပြည်ချစ်တပ်နှင့်မဟာမိတ်များ KNU နယ်မြေမှ အမြန်ဆုံး ထွက်ခွာရန် ရာဇသံပေးပို့ခဲ့သည်။ KNU/KNLA ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မြမှ ချင်းတပ်စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်မှူးဝီလီယံထံသို့ ချင်းလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNU နယ်မြေမှ အမြန်ဆုံးထွက်ခွာရန် ဇွန်လ ၁၄ ရက်နေ့ ၁၉၇၄ တွင်ကြေးနန်းပို့ခဲ့ခြင်းကြောင့် ချင်းတပ်ဖွဲ့မှာ အလွန်အံ့အားသင့်ခဲ့ရသည်။ ရှေ့တန်းရောက် ချင်းလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်သည်လည်း အလျင်အမြန် ကမန်းကတန်း KNU နယ်မြေမှ ထွက်ခွာခဲ့ကြရသည်။ ၎င်းတို့၏ လက်နက်၊ ကျည်ဆန်၊ ကိရိယာအားလုံး သယ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ လက်နက်များကို ဆင်ခြောက်ကောင် ဖြင့်သယ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော်လည်း လက်နက်များအားလုံး မသယ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့် စောမူပလော ရွာသူကြီးထံတွင် HK (33) ရိုင်ဖယလ် ၃၂ လက်နှင့် ကျည်ဆန် ၅၀၀၀ တို့အား ချန်ထားခဲ့ကြသည်။ ထိုမှတဆင့် လိုင်မီးစခန်းဘက်သို့ ဆုတ်ခွာခဲ့ကြရပြီး KNU နယ်စပ်စခန်း စောထာသို့ရောက်ရှိသည့်အချိန်တွင် HK (33) ရိုင်ဖယ်လ် ကျဉ်ဆန် (၄,၀၀၀) ချန်ထားခဲ့ကြပြန်သည်။ ချင်းတပ်ဖွဲ့သည် ဇွန်လ ၂၈ ရက်နေ့ ၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင် လိုင်မီးစခန်းသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ကြသည်။
၁၉၇၄ တွင်ကျင်းပသည့် KNU ကိုးကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးတွင် KNU သည် မဟာမိတ် UNLC မှထွက်ခွာကြောင်း ကြေငြာပြီး UNLC သည်လည်း ပြိုကွဲသွားခဲ့သည်။ ၁၉၇၄ ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်နေ့တွင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးလက်ျာ ထံမှ လိုင်မီးစခန်းသို့ ကြေးနန်းတစ်စောင် ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ထိုကြေးနန်းထဲတွင် ချင်းတပ်ကို ပြည်ချစ်တပ်မတော်မှ ထောက်ပံ့ပေးတော့မည် မဟုတ်ကြောင်း အကြောင်းကြားသည့် ကြေးနန်းဖြစ်သည်။ ထိုနေ့တွင်ပင် ဗိုလ်မှူးဝီလီယံ တပ်သားများထဲမှ တပ်သား ၁၅ ဦး (HK33 ရုင်ဖယ်လ် ၁၅ လက် နှင့် ကျည်ဆန် ၅၀၀ နှင့် M79 ၃ လက်အပါအ၀င်) တို့သည် ပြည်ချစ်တပ်မတော်မှ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးလက်ျာ၏ သမက်ဖြစ်သူ ကရင်လူမျိုး ဗိုလ်မှူးဒေါက်တာမန်းမြင့်ဆိုင်ထံသို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြသည်။ ထို ၁၅ ဦးထဲတွင် အရာခံဗိုလ်ဝင်းမြင့်ဆန်း နှင့် ဇော်ဝင်းတို့လည်း ပါဝင်သည်။ ဗိုလ်ကြီးဝင်းမြင့်ဆန်းသည် နောက်ပိုင်းတွင် လာဟူလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ဗိုလ်မှူးဝီလီယံနှင့်အတူ ထိုင်းနိုင်ငံကို ရောက်လာသည့် ဗိုလ်ကြီးထန်းလှယ်မန်း (မိုက်ကယ်မန်ခမ်း) သည်လည်း ချင်းတပ်ဖွဲ့ KNU နယ်မြေမှ ဆုတ်ခွာသည့်အချိန်တွင် KNU တပ်ဖွဲ့ထံ၌ ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီး ၁၉၈၀ အထွေထွေလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ကာလတွင် မြန်မာပြည်သို့ ပြန်သွားပြီး အလင်းဝင်ခဲ့သည်။
ဗိုလ်ကြီး ဒေနီယဲလ်ထန်လျန်း (Pu David Thang Za Pau) ကျဆုံးခြင်း
ချင်းတပ်ဖွဲ့ KNU နယ်မြေမှ ဆုတ်ခွာသည့်အချိန်တွင် စောမူပလောရွာ (Sawmuplaw) နှင့် စောထာ (Sawhta) စခန်းတွင် ချင်းလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် ရှေ့ဆက် တော်လှန်ရေးလုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် ထိုလက်နက်များသည် အရေးကြီးသည်။ KNU ကမူ ချင်းတပ်ဖွဲ့မှ တပ်သားများ KNU နယ်မြေအတွင်းသို့ ၀င်ရောက်ခြင်းမပြုရန် တားမြစ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော်ချင်းတပ်ဖွဲ့အနေဖြင့် တော်လှန်ရေးရှေ့ဆက်လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် အလွန်အရေးကြီးသည့် ထိုလက်နက်များအား သွားယူရန်ပြင်ဆင်ခဲ့ကြသည်။ ထိုလက်နက်များအား သွားယူရန်အတွက် ဗိုလ်ကြီး ဒေနီယဲလ်ထန်လျန်း နှင့် တပ်ကြပ်မြင့်ကျော်တို့အား တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ရသည်။ ဗိုလ်ကြီးလျန်ထန်း၏ မှတ်တမ်းထဲတွင် … “အဲဒီလက်နက်တွေ ကျွန်တော် (ဗိုလ်ကြီးလျန်ထန်း) နှင့် ဗိုလ်ကြီး ဒေနီယဲလ်ထန်လျန်း (Pu David Thang Za Pau) တို့မှ သွားယူဖို့ ပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် စခန်းမှာ မောစ်ကုတ်သုံးတဲ့ကြေးနန်း သုံးတတ်တဲ့သူမရှိတာကြောင့် ဦးမန်တလင်းမှ ကျွန်တော့ကို ကျန်နေခဲ့ဖို့ပြောတယ်။ ကျွန်တော့အစား ကရင်လူမျိုး ကရင်စကားလည်း တတ်ကျွမ်းသူ တပ်ကြပ်မြင့်ကျော် နဲ့အစားထိုးထားတယ်။ တပ်ကြပ်မြင့်ကျော်ကတော့ သူအမေ ကရင် သူ့အဖေက ဗမာဖြစ်ပြီး ကရင်စကားလည်း ပြောတတ်တာကြောင့် ပိုပြီးအဆင်ပြေမယ့်လို့ ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်ခဲ့တယ်။ သူတို့နှစ်ယောက် လိုင်မီးစခန်းကနေ ဇူလိုင် ၅ ရက် ၁၉၇၄ မှာထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ထွက်ပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်း ဘာသတင်းမှ ကျွန်တော်တို့မကြားတော့ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ဘက်က KNU ဌာနချုပ်နှင့် ပြည်ချစ်တပ်မတော်ကိုလည်း လိုင်မီးစခန်းကနေ ကြေးနန်း (Morse) ပို့ခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာသတင်းမှ ကျွန်တော်တို့မရခဲ့ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ အကြိမ်ကြိမ်စုံစမ်းပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာမှ ပြည်ချစ်တပ်မတော် ဗိုလ်ချုပ်စောကြာဒိုးကနေ စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့ ၁၉၇၄ မှာ “ဗိုလ်ကြီးဒေနီယဲလ်ထန်လျန်းသည် ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်၏ သတ်ဖြတ်ခြင်းကို ခံရသည်” ဆိုပြီး ကြေးနန်းဝင်လာတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မယုံကြည်နိုင်ခဲ့ဘူး။ အဲဒီအကြောင်းကို အတည်ပြုဖို့ ကျွန်တော်တို့ KNU ဌာနချုပ်မှာ အကြိမ်ကြိမ်မေးမြန်းခြင်းပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက် နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့ ၁၉၇၄ တွင် KNU ဌာနချုပ်ဘက်မှ အကြောင်းပြန်ကြားခဲ့တယ်။ ဗိုလ်ကြီးဒေနီယဲလ်ထန်လျန်း သည်ကရင်တပ်ဖွဲ့၏ အဆုံးစီရင်ခြင်းကို ခံရခြင်းဖြစ်သည် ဆိုပြီးအကြောင်းပြန်လာတယ်။ အဲဒီသတင်းကြားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း ကျွန်တော်တို့ အရမ်းဝမ်းနည်းခဲ့ရတယ်။ ကျွန်တော်ဆိုရင် တစ်ပတ်လောက် အိပ်မရ၊ စားမ၀င် ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ သူမထွက်ခွာခင်တုန်းက သူ့မှတ်ပုံတင် နှင့် သူ့မိသားစုဓာတ်ပုံတွေကို ကျွန်တော့ဆီမှာ ထားခဲ့တယ်။ တပ်ကြပ်မြင့်ကျော်အကြောင်းလည်း ကျွန်တော်တို့ဘာမှ မကြားရတော့ဘူး” ဟုတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ထိုသို့ဖြင့် တော်လှန်ရေးဘက်တွင် အလွန်စိတ်အားထက်သန်သည့် လူငယ် ဗိုလ်ကြီးဒေနီယဲလ်ထန်လျန်း (Pu David Thang Za Pau) အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
၁၉၇၄ နှစ်ကုန်တွင် ချင်းလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်၏ အင်းအားသည် ဗိုလ်မှူးဝီလံလျန်ခေါင်းဆောင်သည့် တပ်သား ၂၀ ခန့်သာကျန်ရစ်ခဲ့တော့သည်။ ဗိုလ်မှူးဝီလီယံနှင့် ၎င်းတပ်သား ၂၀ ခန့်သည်လိုင်မီးစခန်းအနီးတွင် သီးနှံစိုက်ပျိုးကြပြီး နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးတွင်လည်း စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ခဲ့ကြသည်။ ဗိုလ်ကြီးလျန်ထန်းသည်လည်း ချင်းမိုင်မြို့သို့ ပြောင်းရွှေ့ပြီး စီးပွားရေးလုပ်ခဲ့သည်။ ပါလီမာန်ဒီမိုကရေစီ ဥက္ကဌ ဦးမန်တလိန်းသည်လည်း ၁၉၇၄ ဒီဇင်ဘာလတွင် ဘန်ကောက်မြို့သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီး The Nation တတင်းစာတွင် အယ်ဒီတာအဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ သူသည် ၀န်ကြီးချုပ်ဦးနုကို အလွန်လေးစား အားကိုးသူဖြစ်ပြီး ၀န်ကြီးချုပ်ဦးနုနှင့်အတူ တော်လှန်ရေးလုပ်ရန် ချင်းပြည်မှ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ရာ ဦးနု နှုတ်ထွက်သွားသည့်နောက်ပိုင်းတွင် တော်လှန်ရေး၌ စိတ်အားထက်သန်ခြင်း မရှိခဲ့တော့ချေ။ ၁၉၇၄ ဒီဇင်ဘာလ နောက်ပိုင်း ချင်းဒီမိုကရေစီပါတီသည် နာမည်အဖြစ်သာ ကျန်ရစ်ပြီး နိုင်ငံရေးဘက်တွင် လှုပ်ရှားမှုမရှိခဲ့တော့ဘဲ ၁၉၈၈ အရေးအခင်းနောက်ပိုင်းမှ သာ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြသည်။ ချင်းလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်သည်လည်း ဗိုလ်မှူးဝီလီယံနှင့် အင်အား ၂၀ ခန့်သာကျန်ရစ်ခဲ့ပြီး သီးနှံစိုက်ပျိုးခြင်း နှင့် စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကာ ရှေ့ဆက်တော်လှန်ရေးအတွက် လာမည့်အခွင့်အရေးကို စောင့်မျှော်ခဲ့ကြသည်။
ပါလီမာန်ဒီမိုကရေစီပါတီကိုလည်း နောက်ပိုင်းတွင် ပြည်သူ့မျိုးချစ်တပ်မတော် (People Patriotic Party) ဟုနာမည်ပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်။ ဦးနုမရှိသည့်နောက်ပိုင်းတွင် ပြည်ချစ်တပ်မတော်အတွင်းတွင် မညီညွတ်မှုနှင့် ပြိုင်ဆိုင်မှုများပေါများဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ တောင်ပိုင်းတိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်ရန်နိုင်သည် အခွန်ကောက်ခံခြင်းအငြင်းပွားမှုကြောင့် KNU တပ်သားများနှင့် ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ပြည်ချစ်တပ်မတော်မှ ထုတ်ပယ်ခြင်းခံရသည်။ ပြည်ချစ်တပ်မတော်အတွင်း အဖွဲ့များကွဲပြားလာပြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီးလက်ျာ နှင့် ဗိုလ်ချုပ်သွင် ဦးဆောင်သည့် ပြည်ချစ်တပ်မတော် (အလယ်ပိုင်း) သာကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ ပြည်ချစ်တပ်မတော်သည် အင်အားလျော့နည်းခြင်းကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ၁၉၇၂ ကျွန်းဆွယ်အရေးအခင်း၊ ၁၉၇၄ ဦးသန့်အရေးအခင်း၊ ၁၉၇၆ မှိုင်းရာပြည့်အရေးအခင်း တို့တွင်အချိန်မှီ လှုပ်ရှားနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ထိုအရေးခင်းများကြောင့် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဆလိုင်းတင်မောင်ဦးသည် တော်လှန်ရေးနယ်မြေသို့ လျှို့ဝှက်သွားရောက်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီးလက်ျာ၊ ဗိုလ်ချုပ်သွင်တို့နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သေးသည်။ ဆလိုင်းတင်မောင်ဦးသည် မြန်မာပြည်သို့ ပြန်လည်လျှို့ဝှက်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး စစ်တပ်မှ ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံရကာ ဇွန်လ ၂၆ ရက်နေ့ ၁၉၇၆ ခုနှစ်တွင် ကြိုးပေးကွပ်မျက်ခြင်းခံရခဲ့သည်။ ပြည်ချစ်တပ်မတော်အတွင်း ဗိုလ်ချုပ်ရန်နိုင်၊ ဒေါက်တာမန်းမြင့်ဆိုင် နှင့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးလက်ျာ စသည်ဖြင့် သုံးဖွဲ့ကွဲခဲ့ကြပြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီးလက်ျာ ၏သား အောင်လက်ျာ လုပ်ကြံခံရသည့် အဖြစ်အပျက်ကြောင့် အချင်းချင်းပစ်ခတ်ခဲ့ကြသည်။ KNU မှလည်း ကြားဝင်ဖြန်ဖြေရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြမှ တပ်ဖွဲ့စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ထိုသို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေချိန်တွင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးလက်ျာ သည်ကျည်သင့်ပြီး သေဆုံးခဲ့ရသည်။ ထို့နောက်တွင် ပြည်ချစ်တပ်မတော်၏ တော်လှန်ရေးသည်လည်း အဆုံးသတ်ခဲ့ရတော့သည်။
ရခိုင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် နှင့် ဗိုလ်မှူးဝီလီယံ ဆာလျန်ဇမ်း
ဗိုလ်မှူးဝီလီယံနှင့်တပ်သားအနည်းငယ်သည် လိုင်မီးစခန်းအနီးတွင် စခန်းချပြီး စိုက်ပျိုးရေး နှင့် စီပွားရေးလုပ်ကိုင်ပြီး ၁၉၇၅ နှင့် ၁၉၇၆ ခုနှစ်များ ဖြတ်ကျော်ခဲ့ရသည်။ ထိုအချိန်တွင် ဗိုလ်ခိုင်မိုးလင်းဦးဆောင်သည့် ရခိုင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (ALA) သည် ရခိုင်ပြည်သို့ပြန်ပြီး တော်လှန်ရေးလုပ်ရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီးဖြစ်သည်။ ရခိုင်ပြည်သို့ပြန်ရန်အတွက် ALA တပ်သည် မဲဟောင်ဆောင် (Mae Hong Son) အနီးသို့ စခန်းချနေချိန်ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်တွင် ဗိုလ်မှူးဝီလီယံ နှင့် ဗိုလ်ခိုင်မိုးလင်းတို့ တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီး ဗိုလ်ခိုင်မိုးလင်းမှ ဗိုလ်မှူးဝီလီယံအား သူတို့နှင့်အတူ လိုက် ပါသွားရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ ဗိုလ်ခိုင်မိုးလင်းသည်လည်း ဗမာ့တပ်မတော် (ရေတပ်) မှ ထွက်ခွာခဲ့သူဖြစ်ပြီး ဗိုလ်မှူးဝီလီယံ နှင့် ဗမာ့တပ်မတော်ရေတပ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့စဉ် ကတည်းက သူတို့နှစ်ဦး သိကျွမ်းပြီးဖြစ်သည်။ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းအာဏာသိမ်းပြီးနောက် ရခိုင်မျိုးချစ်တို့သည်လည်း တော်လှန်ရေးအစိုးရကို တော်လှန်ရန်အတွက် ရခိုင်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ (Arakan Liberation Party) ကို ၁၉၆၇ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်မြို့တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြခြင်းကြောင့် ပါတီဥက္ကဌ ခိုင်မိုးလင်း နှင့် ခေါင်းဆောင်များ အဖမ်းခံခဲ့ရသည်။ ၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် ခိုင်မိုးလင်း ထောင်မှလွတ်မြောက်လာပြီး ၁၉၇၃-ခုနှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်းတွင် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ကော်မူးရာ နယ်မြေသို့သွားရောက်ပြီး KNU ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည့် ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဘဇံ၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောဘိုမြတို့နှင့် သဘောတူညီချက်စာချုပ်တခုချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ပြီး ရခိုင်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ (ALP) နှင့် ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (ALA) တို့ကို ပြန်လည် ဖွဲ့စည်း ထူထောင်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ ထူထောင်ရာတွင် ခိုင်မိုးလင်းကို ပါတီ၏ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်လည်းကောင်း၊ စစ်ဦးစီးချုပ် အဖြစ်လည်းကောင်း ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့ကြသည်။ KNU နယ်မြေတွင် တပ်သားစုဆောင်း လေ့ကျင့်ပေးရင်း တဖြည်းဖြည်း အင်အားကောင်းလာပြီး လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့မဟာမိတ်အသစ်ဖြစ်သော အမျိုးသားဒီမိုကရစ်တစ်တပ်ပေါင်းစု (National Democratic Front) တွင် အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ National Democratic Front (၁၉၇၆-၁၉၈၈) ကို ၁၉၇၆ တွင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး
Arakan Liberation Party(ALP),
Kachin Independence Organization(KIO),
Karen National Union(KNU),
Karennni National Progressive Party(KNPP),
Kayan New Land Party(KNLP),
Lahu National Unity Party(LNUP),
Union Pa-O National Organisation(UPNO),
Palaung State Liberation Organization(PSLO) နှင့်
Shan State Progress Party(SSPP) စသည့်အဖွဲ့များပါဝင်သည်။
ဗိုလ်မှူးဝီလီယံ နှင့် ဥက္ကဌကြီးခိုင်မိုးလင်းတို့သည် ၁၉၇၆ နှစ်ဆန်းပိုင်း ကတည်းက အဆက်အသွယ်ရှိခဲ့ပုံရသည်။ ဗိုလ်မှူးဝီလီယံ ချင်းပြည်တွင် တော်လှန်ရေးလုပ်မည့် အစီအစဉ်ကို ဗိုလ်ကြီးလျန်ထန်း၏ မှတ်တမ်းထဲတွင် “၁၉၇၆ ဇန်နာဝါရီလ ၁၄ ရက်နေ့မှာ ဗိုလ်မှူးဝီလီယံနှင့် ကားမောင်းတဲ့သူတစ်ယောက် ချင်းမိုင်းကို ရောက်လာပြီး ပစ္စည်းလာရောင်းကြတယ်။ သူတို့ရောင်းမည့် ပစ္စည်းတွေကို ကျွန်တော်ဘဲ တာဝန်ယူပေးလိုက်တယ်။ အဲဒီမှာ ကျွန်တော်တို့ ဆွေးနွေးကြတယ်။ ဗိုလ်မှူးဝီလီယံကနေ ငါတို့အားလုံး ချင်းပြည်ပြန်ပြီးတော့ ချင်းပြည်ကနေတော်လှန်ရေး လုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားပြီးပြီ။ ခင်ဗျားလဲ ငါတို့နဲ့ လိုက်ခဲ့ပါလား။ ငါတို့ချင်းပြည်သွားတဲ့အချိန်ကြရင် ချင်းလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (Chin Liberation Army) ကို ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော် (Chin National Army) ဆိုပြီး နာမည်ပြောင်းမယ်။ ငါတို့ ချင်းပြည်သွားနိုင်ဖို့အတွက် ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် (KIA) ဆီမှာ အကူညီတောင်း ဖို့လိုလိမ့်မယ်။ ချင်းပြည်သွားတဲ့ တပ်သားမှန်သမျှ ချင်းပြည်ရောက်လို့ ရှိရင် ရာထူးအဆင့် သုံးဆင့်တိုးပေးမယ်။ ရခိုင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်နှင့်လည်း ဆက်သွယ်ထားတယ်။ တစ်ကယ်လို့ သူတို့နှင့်ပြန်ဖြစ်ရင် သူတို့ရဲ့ ရခိုင်ပြည်ခရီးအတွက် ချင်းပြည်ရောက်တဲ့အချိန်မှာ ငါတို့ကဘဲ အစစအရာရာ သူတို့ရိက္ခာအတွက် စီစဉ်ပေးဖို့လိုလိမ့်မယ်” လို့သူပြောတယ်။ ကျွန်တော်လည်း စဉ်းစားပြီးတော့ ပြန်ပြောတယ်။ အခုချိန် ချင်းပြည်အခြေအနေကို သုံးသပ်ပြီး ချင်းပြည်မှာ တော်လှန်ရေးအတွက် တော်လှန်ရေးအင်အား နှင့် ရေခံမြေခံမရှိတဲ့ အခြေအနေမျိုးဆိုရင်တော့ ဒါဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သတ်သေတဲ့ စစ်ဆင်ရေးဘဲ လို့ကျွန်တ်ာပြန်ပြောခဲ့တယ်။ သူကလည်း ပြန်ပြောတယ် …. လူဆိုတာတစ်နေ့သေရမှာဘဲ .. ငါတို့ဘယ်မှာဘဲ နေနေ .. တစ်နေ့တော့ အားလုံးသေကြရမှာဘဲ .. ဒါပေမယ့် ငါတို့ဒီမှာ သေရတာထက် ချင်းပြည်မှာ ချင်းပြည်အတွက် သေရရင် ငါတို့အတွက် ပိုပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတယ် .. လို့သူပြန်ပြောတယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း စိတ်တော့မကောင်းဘူး .. အဲဒီလိုဆိုရင်လည်း ငါကတော့ လိုက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး .. ခင်ဗျားတို့ဘဲ တော်လှန်ရေးလုပ်ဖို့ သွားကြပါ …. ကျွန်တော်ဒီကနေ ကူညီနိုင်တာရှိရင် တတ်နိုင်သမျှကူညီမယ် လိုကျွန်တော်ပြန်ပြောခဲ့တယ်။ သူကလည်း စိတ်ကျေနပ်စွာနဲ့ သဘောတူခဲ့တယ် .. ဟုတွေ့ရှိနိုင်သည်။
ALA/ALP ဥက္ကဌခိုင်မိုးလင်းဦးဆောင်သော မိုးလင်းရာဇာစစ်ကြောင်းသည် ရခိုင်ပြည်သို့ ချီတက်ပြီး တော်လှန်ရေးဆက်လုပ်ရန် KNU နယ်မြေမှ ၁၉၇၆ ဇွန်လတွင် စတင်ချီတက် ထွက်ခွာလာခဲ့ကြပြီး ကရင်နီနယ်စပ်တွင် စခန်းချခဲ့ကြသည့် အချိန်တွင် ဗိုလ်မှူးဝီလီယံ နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ထိုသို့တွေ့ဆုံခဲ့သည့် အဖြစ်အပျက်ကို မိုးလင်းရာဇာစစ်ကြောင်းတွင် ပါဝင်ပြီး ALA နှင့်အတူ ချင်းပြည်ခရီးကို ဗိုလ်မှူးဝီလီယံတို့နှင့် အတူခရီးဆက်ခဲ့သူ ဗိုလ်မှူးခိုင်မျိုးမင်းမှ ယခုလိုပြန်လည်ပြောကြားခဲ့သည်။ “ကျွန်တော်တို့က ရခိုင်ပြည်ပြန်ဖို့ မဲစာရင်း (Maesariang) ကနေ ၁၉၇၆ ဇွန်လမှစထွက်တယ်။ မဲဟောင်ဆောင် (Mae Hong Son) မြို့ မဲဟောင်ဆောင်အနောက်ဘက် SSPP ရှမ်းလက်နက်ကိုင်တွေ ဆက်ဆံရေးစခန်းဖွင့်တဲ့နေရာမှာ စခန်းချတယ်။ ဥက္ကဌကြီးက တစ်ခေါက်ပြန်သွားတယ် .. ဘယ်သွားလဲဆိုတာတေ့ အတိအကျမသိဘူ .. အဲဒီစခန်းမှာဘဲ ဥက္ကဌကြီးနှင့် ဗိုလ်မှူးဝီလီယံတို့ တစ်နေ့ညနေစောင်းတဲ့အချိန်လောက် ပြန်လာကြတယ်။ အဲဒီမှာ ဥက္ကဌကြီးက ဗိုလ်မှူးဝီလီယံကို ကျွန်တော်တို့ ရခိုင်တပ်နဲ့လိုက်ခဲ့ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်။ ဗိုလ်မှူးဝီလီယံကလည်း သူလည်း ချင်းပြည်ပြန်ပြီး တော်လှန်ရေးလုပ်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ် .. ဒါပေမယ့် ငွေရေးကြေးရေး ဘက်မှာ အဆင်မပြေသေးတဲ့အကြောင်း သူပြေန်ပြောတယ် .. ဦးနုပါတီကနေ သူတို့ချင်းပါတီကို ထောက်ပံ့ခဲ့တဲ့လက်ကျန်ငွေ သူရှာနေတဲ့အကြောင်းပြောတယ်။ သူကအဲလိုပိုက်ဆံရှာပြီး ချင်းပြည်အတွက် တော်လှန်ရေး ဆက်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အကြောင်း ပြောတယ်။ ချင်းတွေထဲမှာ သူဘဲတော်လှန်ရေး လုပ်ဖို့ ကြိုးစားတယ်။ ဥက္ကဌကြီးကလည်း အခုလိုမျိုးကြုံဖို့ ဆုံဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူး .. ကျွန်တော်တို့ ကြုံတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ အတူသွားရအောင် .. ခင်ဗျားလိုအပ်တဲ့အရာတွေကို ကျွန်တော်တတ်နိုင်သဘောက် ပံ့ပိုးပေးမယ် .. ငွေရေးကြေးရေး လက်နက်တွေဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို့ ပံ့ပိုးပေးမယ် လို့ပြောခဲ့တယ် .. နောက်ပြီးတော့ ချင်းလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကို တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရစ်တစ်တပ်ပေါင်းစု (National Democratic Front) မှာအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်နိုင်အောင် ကူညီမယ်” လို့ဥက္ကဌကြီးက ပြောခဲ့တယ်။ ဗိုလ်မှူးခိုင်မျိုးမင်းမှ ဆက်လက်ပြောကြားရာတွင် “အဲဒီချိန်တုန်းက တိုင်းရင်းသား နယ်မြေတိုင်းမှာ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ရှိတယ်။ ချင်းပြည်မှာဘဲ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့မရှိတာ။ ဥက္ကဌကြီးကလည်း ချင်းပြည်မှာ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ရှိလို့ရှိရင် ချင်းပြည်အတွက်ကော ရေရှည် ရခိုင့်တော်လှန်ရေးအတွက်ကော အထောက်အကူပြုမယ်လို့ သုံးသပ်ထားတယ်၊ အဲဒါကြောင့် ဗိုလ်မှူးဝီလီယံကို ချင်းပြည်မှာ အခြေချပြီး တော်လှန်ရေးလုပ်ဖို့ ပြောခဲ့တာ” ဟုပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ဗိုလ်မှူးဝီလီယံဆာလျန်ဇမ်း ချင်းပြည်သို့ ချီတက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခြင်း
ထိုအချိန်တွင် ဗိုလ်မှူးဝီလီယံဆာလျန်ဇမ်းသည် ချင်းပြည်သို့တော်လှန်ရေး လုပ်ဆောင်ရန် အဆင်သင့်မဖြစ်သေးခဲ့ပေ။ ငွေရေးကြေးရေးအရ သော်လည်းကောင်း၊ လူအင်အား နှင့် လက်နက်အင်အားအတွက် သော်လည်းကောင်း၊ ချင်းပြည်အတွင်း (သို့) နယ်စပ်တွင် အခြေချနိုင်မည့် နေရာအတွက် သော်လည်းကောင်း အဆင်သင့်မဖြစ်ခဲ့သော်လည်း ချင်းပြည်အတွက် တော်လှန်ရေး အသစ်မှအစပြုနိုင်မည့် အခွင့်အရေးကို လက်မလွှတ်လိုခဲ့ပေ။ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး ဆိုသည်မှာ ခက်ခဲသည့်အရာ ဖြစ်သည်ကို ဗိုလ်မှူးဝီလီယံ မသိရှိခဲ့ခြင်းမဟုတ်။ တော်လှန်ရေးလုပ်ရန် သူဆုံးဖြတ်သည့်အချိန်မှစပြီး သူ.. သူ ချစ်တဲ့ ချင်းပြည်အတွက် အသက်စွန့်လွတ်ဖို့ အဆင်သင့်၊ သေရင်တောင်မှ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ မသေလိုဘဲ ချင်းပြည်မှာ ချင်းပြည်အတွက်သာ သေချင်သည့် ဗိုလ်မှူးဝီလီယံ ရခိုင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် နှင့်အတူ ချီတက်ပြီး ချင်းပြည်မှ တော်လှန်ရေးစတင်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်က တော်လှန်ရေး အတွေးအခေါ်သည် Fidel Castro နှင့် Che Guevara တို့၏ ကျူးဘားတော်လှန်ရေး နှင့် တရုတ်နိုင်ငံ မော်စီတုံး၏ တော်လှန်ရေးတို့မှ လွှမ်းမိုးသည့်ချိန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်လည်း တော်လှန်ရေး လုပ်သည့်အချိန်တွင် ၎င်းတို့ရောက်သည့်နေရာမှ ပြည်သူများအားစည်းရုံးပြီး အောင်မြင်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဗိုလ်မှူးဝီလီယံဆာလျန်ဇမ်းသည် ချင်းပြည်ရောက်သည့်အချိန်တွင် တော်လှန်ရေးအတွက် စည်းရုံးရေး အရင်ဆင်းပြီးမှ ပြည်သူများနှင့်အတူ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်း တော်လှန်ရေးအစိုးရအား တော်လှန်မည် ဆိုသည့် အကြံရှိခဲ့သည်။ ထိုခေတ်တော်လှန်ရေးသမားများ၏ အတွေးတွင် ပြည်သူ့အာဏာသိမ်းသည့် ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းအစိုးရကြောင့် ပြည်သူများဒုက္ခရောက်ကြသည်၊ ထို့ကြောင့် ပြည်သူများမှလည်း ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းအစိုးရကို တော်လှန်သည့် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကို ကူညီကြမည်ဟု ယုံကြည်ခဲ့ကြသည်။ ဗိုလ်မှူးဝီလီယံသည် ဆက်ဆံရေးကောင်းသူဖြစ်ပြီး ပြည်သူတွေကို စည်းရုံးနိုင်မည်ဟု သူ့ကိုယ်သူယုံကြည်ခဲ့သည်။
ဗိုလ်မှူးဝီလီယံသည် ချင်းပြည်အခြေစိုက် တော်လှန်ရေးအတွက် နိုင်ငံအတွင်း၌ စည်းရုံးမှုများလည်း လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ဗိုလ်မှူးဝီလီယံသည် တော်လှန်ရေးအတွက် သူ့မျိုးနွယ်စုဝင်ဖြစ်သည့် ဇာဟောင် (Zahau) မျိုးနွယ်စုဝင်များ စည်းရုံးခဲ့သည့်အကြောင်းကို ဆလိုင်းကိပ်ခိုလျန်မှ ပြောကြားရာတွင် “ဗိုလ်မှူးဝီလီယံ ချင်းပြည်ခရီးမစတင်မီ အချိန်မှာ ထိုင်းနိုင်ငံကနေ တော်လှန်ရေးအတွက် လှုံ့ဆော်တဲ့စာတွေ အများကြီးပို့ထားတယ်။ ၁၉၇၅/၇၆ ၀န်ကျင်းလောက်ဖြစ်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆွေမျိုးထဲက စာပို့သမား (Post Man) အသိတစ်ယောက်ရှိတယ်။ စာအိတ်ပုံစံတူ စာတွေအများကြီးရောက်လာတယ်။ တာဟန်းနီးနား ဇာဟောင် (Zahau) တွေနေထိုင်တဲ့နေရာတွေမှာ ဖြန့်ဖို့ဖြစ်တယ်။ အဲဒီစာပို့သမားကလည်း ပုံစံတူစာတွေများလွန်းတော့ သူဖောက်ကြည့်တယ်။ စာထဲမှာ တော်လှန်ရေးအတွက်လှုံ့ဆော်စာတွေ ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပါတယ်ဆိုတော့ သူကျွန်တော့ကို မေးတယ်။ ကျွန်တော်လည်း စာကိုဝင်ကြည့်တော့ ချင်းလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ရဲ့ တံဆိပ်နဲ့ ဗိုလ်မှူးဝီလီယံ ကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးပိုတဲ့စာ .. ချင်းပြည်မှာတော်လှန်ရေးစတင် လုပ်မယ့်အကြောင်း အဲဒီတော်လှန်ရေးမှာ ၀င်ပါဖို့လှုံ့ဆော်တဲ့စာဖြစ်တယ် .. ကျွန်တော်ကတော့ဘာလဲဆိုတာသိတယ် .. ဒါပေမယ့် မသိချင်ဟန်ဆောင်လိုက်တယ်။ စာပို့သမား အကုန်ဖြန့်ဖြစ်လားတော့ မသိဘူး။ ဗိုလ်မှူးဝီလီယံ ကျဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာ ကျွန်တော်ကြားမိတာကတော့ သူ့တော်လှန်ရေးအတွက် ဇာဟောင်လူငယ် ၂၀၀ လောက်စည်းရုံးပြီးသားလို့ ပြောကြတယ်” ဟုပြန်လည်ပြောကြားခဲ့သည်။
ဤသို့ဖြင့် ဗိုလ်မှူးဝီလီယံသည် ချင်းပြည်မှတော်လှန်ရေးလုပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ပြီးနောက် ၎င်းနှင့်အတူ ချင်းပြည်တွင် တော်လှန်ရေးလုပ်ရန် ၎င်းတပ်ထဲမှ တပ်သားတွေကို စည်းရုံးခဲ့ရာ ၁၂ ယောက်ကို စည်းရုံးနိုင်ခဲ့ပြီး သူနှင့်လိုက်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ဗိုလ်မှူးခိုင်မျိုးမင်းမှ ပြောကြားရာတွင် “ဗိုလ်မှူးဝီလီယံနှင့်အဖွဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ ရခိုင်လွတ်မြော်ကရေးတပ်မတော် ကနေ M16, G3, G4 စတဲ့လက်နက်တွေ အပြည့်တပ်ဆင်ပေးတယ်။ ဗိုလ်မှူးဝီလီယံအဖွဲ့ထဲမှာ ဗမာ့တပ်မတော်ထဲက ထွက်တဲ့သူတွေများတယ် .. ချင်းလူမျိုးတွေအပြင် ကရင်၊ ရခိုင် လူမျိုးတို့လည်းပါဝင်ကြတယ်။ မှတ်မှတ်ရရဆိုလို့ ဖလမ်းနယ် ဇာဟောင်မျိုးနွယ်စုထဲက ဗန်နာ ဆိုတဲ့တစ်ယောက်ရယ်၊ ကရင်လူမျိုး စောလှထွန်း ဆိုတဲ့သူတွေကိုဘဲ နာမည်မှတ်မိတယ်။ ငွေရေးကြေးရေးဘက်မှာလည်း ဗိုလ်မှူးဝီလီယံ ပါလာတဲ့ငွေတွေလည်း ရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဥက္ကဌကြီးခိုင်မိုးလင်း ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဟာလည်း ရှိတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ဗိုလ်မှူးဝီလီယံတို့အဖွဲ့ (ချင်းလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်) တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုဖြစ်တဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်တပ်ပေါင်းစု (National Democratic Front) ၀င်ဖြစ်အောင် ကျွန်တော်တို့ ဥက္ကဌကြီးက ကူညီခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့မထွက်ခင်မှာဘဲ ဥက္ကဌကြီးက ချင်းလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် NDF အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ဖို့ ကြေးနန်းလှမ်းပို့တယ်။ NDF ကလည်းလက်ခံတဲ့အကြောင်း ကြေးနန်းပြန်ဝင်လာတယ်” လို့ပြောခဲ့သည်။
တော်လှန်ရေးအတွက် မိုးလင်းရာဇာစစ်ကြောင်း မိုင်နှစ်ထောင်ကျော်ခရီး ချီတက်ခြင်း
ရခိုင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် ဥက္ကဌခိုင်မိုးလင်းဦးဆောင်သည့် စစ်ကြောင်းသည် အင်အား ၁၂၆ ရှိပြီး မိုးလင်းရာဇာစစ်ကြောင်းဟုအမည်ပေးထားသည်။ မိုးလင်းရာဇာစစ်ကြောင်းနှင့်အတူ ဗိုလ်မှူးဝီလီယံခေါင်းဆောင်သည့် ချင်းလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်မှ ၁၂ ယောက်တို့သည် ၁၉၇၆ ဇွန်လ ကုန်တွင် မိုင်နှစ်ထောင်ကျော် ခရီးရှည်တစ်ရပ်ကို ထိုင်း၊မြန်မာ နယ်စပ်မှ SSPP ခါးဟန်စခန်းမှစတင် ထွက်ခွာခဲ့ကြသည်။ တောင်စွယ်တောင်တန်းများ ဖြတ်ကျော်ပြီး ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ဗိုလ်ခွန်ရဲနောင်အဖွဲ့စခန်းချသည့် မဲအော့ရွာနားသို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြသည်။ ထိုစခန်းမှ သံလွင်မြစ်ကို ဖြစ်ကူးကြပြီး ရှမ်းပြည်အလယ်ပိုင်းသို့ ချီတက်ကြရသည်။ တော်လှန်ရေးသမားများအတွက် သေမင်းတမာန်လမ်းဟု လူသိများသည့် လေးကျား-မိုင်းကိုင် ကားလမ်းကိုဖြတ်ပြီး ရှမ်းပြည်အလယ်ပိုင်း မိုးဟိန်းစခန်းကို သို့ရောက်ရှိခဲ့ကြသည်။ ရှမ်းပြည်အလယ်ပိုင်းမှ မြောက်ပိုင်းသို့ချီတက်ရာတွင် ဗမာ့တပ်မတော် နှင့် ကွန်မြူနစ်တပ်ကို ရှောင်ပြီး ခရီးဆက်ခဲ့ကြရကာ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ကချင်တပ်မဟာ (၄) ဗိုလ်မှူးကြီး ဇော်ဘန်စခန်းအရောက် အောင်မြင်စွာချီတက်နိုင်ခဲ့ကြသည်။ ကချင်တပ်မဟာ (၄) တွင် ရက်ပေါင်း (၃၀) ခန့်အနားယူပြီး သိန္နီမြို့နယ်ဘက်သို့ ဆက်လက်ချီတက်ခဲ့ကြသည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် ရွှေလီမြစ်ကို ဖြတ်ကူးပြီး KIA ဌာနချုပ်အနီ နာလုံနယ်တွင် ရောက်ရှိခဲ့ကြသည်။ မိုးလင်းရာဇာစစ်ကြောင်း နေ့ညမနား ကရင်ပြည်မှ ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်း၊ အလယ်ပိုင်းမှ ကချင်ပြည်နယ်အထိ တောလမ်းခရီးသက်သက် ခရီးဆက်ခဲ့ကြသောကြောင့် ရဲဘော်များမှာပင်ပန်းလျက်ရှိကြသည်။ ထို့ကြောင့် ကချင်တပ်မဟာ (၂) စခန်းတွင် သုံးလခန့် အနားယူခဲ့ကြသည်။ ကချင်တပ်မဟာတွင် အနားယူပြီးနောက် ဆက်လက်ထွက်ခွာလာခဲ့ကြပြီး ဧရာဝတီမြစ်ကို ဆင်ဘိုအနီးမှ ဖြတ်ကျော်ကြသည်။ ထို့နောက် ကွေ့ကောက်ချောင်းနှင့် မိုးကောင်းချောင်းနယ်ကို ဖြတ်ခဲ့ကြပြီး မန္တလေး-မြစ်ကြီးနား ရထားလမ်းကို ဟိုပင်-ဆားမှော် ကြားအပိုင်း မှ ဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် ကာမိုင်း၊ ဖားကန့်၊ ဥရုချောင်း၊ တနိုင်းခမြစ်၊ ခန္တီးမြို့နယ်မြောက်ပိုင်း ချင်းတွင်းမြစ်ကြီး မြစ်ဖျားခံရာ ဒေသသို့ရောက်ရှိခဲ့ကြသည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် နာဂတောင်တန်းကို ဖြတ်ကျော်ခဲ့ကြပြီး နာဂတောင်တန်း-မြန်မာနယ်စပ်ရှိ ပုံညို၊ ထိုမှတစ်ဆင့် မြန်မာပြည်အတွင်းဝင်လာကြပြီး ဟုမ်္မလင်းမြို့မြောက်ပိုင်း လေရှီးနယ် တစ်ဝိုက် ထာဒို/ကူကီး ကျေးရွာရှိရာနယ်မြေတွင် ရောက်ရှိလာခဲ့ကြသည်။ ထိုသို့ မြန်မာနယ်စပ်အတွင်း ၀င်ရောက်လာသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် ဗမာ့တပ်မတော် အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် လက်အောက် တပ်ရင်း (၈၅) မှ တပ်စိပ်တစ်ခု နှင့် ထိတွေ့ခဲ့ကြပြီး တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုတိုက်ပွဲပြီးနောက် မိုးလင်းရာဇာစစ်ကြောင်းသည် အိန္ဒိယနယ်စပ်ဘက်သို့ အပြင်းချီခဲ့ကြသည်။ အိန္ဒိယနယ်စပ်၌ မိုးလင်းရာဇာစစ်ကြောင်း ပြန်လည်စုစည်းပြီး တပ်များကို စီစစ်သောအခါ ရခိုင်တပ်မှ တပ်ခွဲမှူးဗိုလ်ကြီးကျော်ဟန် ပျောက်ဆုံးခဲ့သည်။
ဗမာ့တပ်မတော်၊ အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် (န.မ.ခ) ၏ မြရတနာစစ်ဆင်ရေးဗျူဟာ
ဗမာ့တပ်မတော် အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် (န.မ.ခ) သည်မိုးလင်းရာဇာစစ်ကြောင်း ချီတက်လာသည့်အကြောင်းကို ကြိုတင်သိရှိခဲ့ကြပြီး စစ်ကိုင်း၊ အိနွိယနယ်စပ်တစ်လျှောက် နှင့် ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင် တပ်ဖြန့်ထားခဲ့သည်။ န.မ.ခ မှ ဤစစ်ဆင်ရေးကို “မြရတနာစစ်ဆင်ရေး” ဟုနာမည်ပေးထားခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် န.မ.ခ အောက် တပ်ရင်း ၈၉ တွင် ထာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ တပ်ကြပ်ကြည်သိန်းမှ ပြန်လည်ပြောကြားရာတွင် “ခိုင်မိုးလင်းဦးဆောင်တဲ့ ရခိုင်သူပုန်တွေ လာမယ်ဆိုတာ တပ်မတော်ဘက်က ကြိုတင်သိထားတဲ့အတွက်ကြောင့် ကြိုပြီးစောင့်နေခဲ့တယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းက တပ်မတော်ရဲ့ ဆက်သွယ်ရေး ကိရိယာတွေလည်း တော်တော်ကောင်းတယ်။ သူတို့ပို့တဲ့ မောစ်ကုတ်ကြေးနန်းတွေ တပ်မတော်စစ်ထောက်လှမ်းရေးဘက်ကနေ အကုန်ဖမ်းထားတယ်။ အဲဒါကြောင့် သူတို့ နာဂတောင်တန်း ၀င်တဲ့အချိန်ကနေ တပ်မတော်ဘက်က သူတို့လှုပ်ရှားမှုတွေကို သိနေတယ်။ ကျွန်တော်က အဲဒီအချိန်မှာ ရဲဘော်အဆင့်ဘဲရှိတယ်။ န.မ.ခ အောက်က ကလေးမြို့အခြေစိုက် ခြေလျင်တပ်ရင်း (ခ.လ.ရ) အမှတ် ၈၉ တစ်တပ်ရင်းလုံး အိနွိယ-စစ်ကိုင်းနယ်စပ်မှာ အကုန်ဖြန့်ထားတယ်။ ကျွန်တော်ပါတဲ့ တပ်ရင်း (၈၉) အောက်က တပ်ခွဲတစ်ခွဲကတော့ ခမ်းပတ် (Khampat) ကနေ စောင့်နေခဲ့ကြတယ်။ နာဂတောင်တန်းကနေ မြန်မာပြည်တွင်းကို ၀င်လာပြီးဆိုတာနဲ့ တပ်ရင်း (၈၉) ထဲက တပ်စုတစ်စု ကလိုက်တယ်။ ခိုင်မိုးလင်းနဲ့ဝီလီယံတို့ အဖွဲ့က အိနွိယဘက်ကို ပြန်ကူးသွားတော့ ပစ်လို့မရဘူး။ အဲဒီလို တပ်ရင်း (၈၉) ကနယ်စပ်အတိုင်း တောက်လျှောက်လိုက်လာတာ။ အဲဒီတုန်းက န.မ.ခ အောက်မှာ တပ်ရင်း ခြောက်ရင်း ခ.လ.ရ ၄၂၊ ၅၀၊ ၈၇၊ ၈၈၊ ၈၉၊ ၉၅ ရှိတယ်။ ဒီစစ်ဆင်ရေးမှာ တပ်ရင်း ၈၉ ကတပ်ရင်းတစ်ရင်းလုံးပါတယ်။ ကျန်တဲ့တပ်ရင်းတွေမှာတော့ တပ်ရင်းတစ်ရင်း ထဲကတပ်ခွဲ တစ်ခွဲစီပါတာပေါ့။ စုစုပေါင်းတပ်ရင်းတစ်ရင်း နှင့် တပ်ခွဲ ၅ ခွဲပေါ့။ အဲဒီအချိန်တုန်းက ခ.လ.ရ တပ်ရင်း တစ်ရင်းမှာ တပ်ခွဲ ၅ ခွဲပါတယ်၊ တပ်ခွဲတစ်ခွဲမှာ အင်အား ၁၁၅ ၀န်းကျင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့တွေ၊ ပြည်သူ့စစ်တွေလဲ ပါတာပေါ့။ တပ်ရင်း ၈၉ ကလွဲပြီး ကျန်တဲ့တပ်ရင်းတွေကတော့ ချင်းပြည်နယ် နယ်စပ်တစ်လျှောက်၊ သိုင်ငင်းအောက်ထိ တပ်ဖြန့်ထားခဲ့တယ်။ ရခိုင်သူပုန်တွေက နယ်စပ်အတိုင်း တောက်လျှောက်ဆင်းလာတာ။ သူတို့တမူးကို ကျော်လာပြီဆိုတာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ကို နေရာရွှေ့ခိုင်းတယ်။ ချင်းပြည်နယ်နှင့် အိနွိယနိုင်ငံ မဏိပူရ်ပြည်နယ် နယ်စပ်တစ်လျှောက်မှ တပ်ဖြန့်ထားတယ်။ ကျွန်တော်တို့တပ်စိတ် အဲဒီနယ်စပ်နားမှာရှိတဲ့ တွန်းဇံမြို့ အရှေ့မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ စိမ်းပီာလ် (Singpial) ရွာမှ ပြန်စောင့်ရတယ်။ တစ်ခြားတပ်စိတ်တွေလည်း လဲန်နာကော့ (Lennakot) နှင့် အခြားရွာတွေ ပြန်စောင့်ထားတယ်။ နောက်တော့ ဗျူဟာမှူးက ကျွန်တော်တို့ကို တွန်းဇံမြို့အနားက ဆဲန်နမ် (Senam) ရွာကို ပြန်ဆုတ်ခိုင်းတယ်။ အဲဒီကနေ တဆင့် စစ်ကားနဲ့ တွန်းဇံကနေ ဆင်းလာပြီး လိုင်ဘုန် (Laibung) ရွာမှာ ပြန်ပြီးနေရာယူရတယ်” ဟုပြောပြခဲ့သည်။
ဥက္ကဌကြီးခိုင်မိုးလင်းခေါင်းဆောင်သည့် ရခိုင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် နှင့် ဗိုလ်မှူးဝီလီယံခေါင်းဆောင်သည့် ချင်းလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်တို့ ပါဝင်သည့် မိုးလင်းရာဇာစစ်ကြောင်းသည် ထာထို၊ကူကီးရွာ အနီး တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ မဏိပူရပြည်နယ်သို့ လမ်းလွဲချီတက်ခဲ့ကြသည်။ ဤသို့ဖြင့် အိနွိယနယ်မြေအတွင်း ရောက်သည့်အချိန်တွင် အိနွိယတပ်ဖွဲ့ နှင့်လည်း ထိတွေ့မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ မိုင်းလင်းရာဇာစစ်ကြောင်း အိနွိယနယ်မြေမှ ဖြတ်သန်းခွင့်မပြုရန် မြန်မာ့အစိုးရမှ တောင်းဆိုမှုများ ရှိခဲ့သည်ဟုလည်း ဆိုကြသည်။ အိနွိတပ်မတော်နှင့် တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ရသည့် အကြောင်းရင်းအား ထိုအချိန်တွင် မိုးလင်းရာဇာစစ်ကြောင်းနှင့်အတူ ချီတက်ခဲ့သည့် ရခိုင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်မှ အရာရှိ ဗိုလ်မှူးခိုင်မျိုးမင်းမှ ပြန်လည်ပြောကြားရာတွင် “ကျွန်တော်တို့ စစ်ကြောင်းကို ရွာမှာထားပြီးတော့ လုံခြုံရေးယူထားတဲ့အချိန်မှာ အိနွိယစစ်တပ်က လှည့်ကင်း လာနေတာကို ကင်းသမားတွေ လှမ်းမြင်တယ်။ ရန်သူတစ်ဖက်ကလာနေတယ် .. ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုပြီး ကင်းစောင့်တွေကလှမ်းမေးတယ်။ ဒါပေမယ့် အကြောင်းပြန်ကြားခြင်းမရှိတဲ့အချိန်မှာ အရမ်းနီးကပ်လာတာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေ စတင်ပစ်ခတ်ခဲ့တာ .. အဲဒီမှာ အိနွိယစစ်သား တစ်ယောက်ဆုံးတယ်” ဟုပြန်ပြောခဲ့သည်။ ထို့နောက် အိနွိယစစ်တပ်နှင့် နောက်ထပ်သုံးကြိမ် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သည့်အကြောင်းကို ထိုအချိန်တွင် မိုးလင်းရာဇာစစ်ကြောင်းနှင့်အတူ ချီတက်ခဲ့သည့် ရခိုင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်မှ အရာရှိ ဗိုလ်မှူးခိုင်နီရောင် ၏ မှတ်တမ်းတွင် “ကျွန်တော်တို့စစ်ကြောင်း အိန္ဒိယနယ်ထဲသို့ရောက်လာသဖြင့် အိန္ဒိယနယ်စောင့်စစ်သားများကို ကျော်ဖြတ်ခွင့်တောင်းသည်။ အိန္ဒိယစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်များနှင့် ဆွေးနွေးပြီး ကျွန်တော်တို့အပြန်တွင် အိနွိယစစ်ပတ်မှ ၀င်တိုက်သဖြင့် မိုးလင်းရာဇာစစ်ကြောင်းမှ အန္ဒိယတပ်ဖွဲ့ကိုခုခံခဲ့ရသည်။ ရခိုင်တပ်ဖွဲ့ အနေဖြင့် အိန္ဒိယစစ်တပ်ကိုလုံးဝမတိုက်လို။ အိန္ဒိယစစ်တပ်မှ လေးကြိမ်တိုင်တိုင် ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်သည်။ ခုခံတိုက်ခိုက်ယင်း ချင်းတောင်တန်းကို ပြန်လည်ဆုတ်ခွာရသည်” ဟူ၍ ရေးသားထားသည်။
၁၉၆၅ ခုနှစ်တွင် အိန္ဒိယအစိုးရ နှင့် မြန်မာအစိုးရတို့သည် နယ်စပ်ရှိ လက်နက်ကိုင် လှုပ်ရှားသူများအား နှစ်ဖက်ပူးပေါင်းနှိမ်နင်းရန် သဘောတူခဲ့ကြရာမှ ၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင် အိနွိယနယ်စပ်မှ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းဦးဆောင်သည့် အစိုးရအား တော်လှန်ရေးလုပ်ဆေင်ခဲ့ကြသည့် ဦးဆွန်ခိုပေါင် (Pu Son Kho Pau)၊ ဦးဟရန်နော် (Pu Hrang Nawl)၊ ဦးသွာလ်ဇဲန် (Pu Thual Zen) နှင့် အခြားချင်း ခေါင်းဆောင်များကို ၁၉၆၅ ခုနှစ်တွင် အိနွိယစစ်တပ်မှ ဖမ်းဆီးပြီး မြန်မာအစိုးရထံသို့ အပ်နှင်းခဲ့ကြဖူးသည်။ တစ်ဖန် ၁၉၇၇ နှစ်ဦးပိုင်းတွင် Arakan Independence Organization (AIO) မှ အင်အား ၈၃ ရှိသည့် တပ်သားများသည် ရခိုင်ပြည်သို့ အပြန်၊ ချင်းပြည်နယ် (ထန်ထလန်မြို့နယ်) နှင့် အိနွိယနယ်စပ်တွင် အိနွိယစစ်တပ် နှင့် ဗမာ့စစ်တပ် နှစ်ခုလုံးနှင့် တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြရာမှ ၁၅ ဦးသေဆုံးပြီး ၈ ယောက်သာ ရခိုင်ပြည်သို့ချီတက်နိုင်ခဲ့ကြကာ ကျန်တပ်သားများမှာ ပျောက်ဆုံး (သို့) အဖမ်းခံခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ AIO သည် ၁၉၇၀ ၀န်းကျင်တွင် ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ပြီး KIA ထံတွင် စစ်သင်တန်းတက်ရောက်ပြီး ၁၉၇၇ နှစ်ဦးပိုင်း၌ ရခိုင်ပြည်သို့ ချီတက်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
ဤသို့ဖြင့် ဥက္ကဌကြီး ခိုင်မိုးလင်းနှင့် ဗိုလ်မှူးဝီလီယံတို့ စစ်ကြောင်းသည် အိန္ဒိယ-မြန်မာနယ်စပ်တွင် ပိတ်မိနေခဲ့ကြသည်။ အိနွိယနယ်အတွင်းသို့လည်း ဖြတ်သန်းခွင့်မရခဲ့ချေ။ အိနွိယစစ်တပ်မှ ပိတ်ထားသည်။ ထိုအချိန်သည် ၁၉၇၇ မေလကုန်လောက်ဖြစ်ပြီး မိုးတွင်းကာလာဖြစ်သည်။ ရာသီဥတုကလည်း ဆိုးရွားသည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ မိုးကလည်းရွာ၊ ရိက္ခာကလည်းပြတ်၊ ပျောက်ကျားအ၀တ်အစား များလည်းစုတ်ပြတ်၊ ဘုတ်ဖိနပ်ပင် စီးဖို့မရှိသည့်အခြေအနေ သို့ရောက်ရှိခဲ့ကြသည်။ မိုးလင်းရာဇာစစ်ကြောင်းသည် ချင်းပြည်ထဲသို့ဝင်ပြီး တိုက်ပွဲဝင်ရန်မှ တစ်ပါး တစ်ခြားနည်းလမ်းမရှိတော့သဖြင့် ချင်းပြည်ထဲမှဖြတ်ရန် တော်လှန်ရေး ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦး ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ဗိုလ်မှူးဝီလီယံသည် ဥက္ကဌကြီးခိုင်မိုးလင်းထံသို့ “ကျွန်တော်ချင်းလူမျိုးပါ .. ချင်းပြည်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ် .. ကျွန်တော်အသက်နှင့်ရင်းပြီး ကာကွယ်ပါမည်” ဟု ပြောခဲ့သည်။ ဥက္ကဌကြီးခိုင်မိုးလင်းမှလည်း ဗိုလ်မှူးဝီလီယံကို ယုံကြည်သည်။ ထို့နောက် ဗိုလ်မှူးဝီလီယံနှင့် ချင်းတပ်မှ ရှေ့ကဦးဆောင်ပြီး ဥက္ကဌကြီးခိုင်မိုးလင်းတပ်ကိုလည်း ချီတက်ရန်အမိန့်ပေးတော့သည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ မဏိပူရပြည်နယ်မှ ချင်းပြည်သို့ ပထမဆုံး ၀င်ရောက်လာသည့်နေရာမှာ တွန်းဇံမြို့နယ် စိမ်းပီာလ် (Singpial) ရွာဖြစ်သည်။
အပိုင်း (၃) တွင် တွန်းဇံမြို့နယ်မှ တိုက်ပွဲအကြောင်း၊ လိုင်ဘုန်း (Laibung) တိုက်ပွဲအကြောင်း နှင့် စီးယင်းနယ်ထဲမှ တိုက်ပွဲအကြောင်းများ၊ ဗိုလ်မှူးဝီလီယံ နှင့် ရခိုင့်အာဇာနည် ခိုင်မိုးလင်းတို့ ချင်းပြည်အတွင်း ကျဆုံးခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်များအကြောင်း ဖော်ပြသွားမည်ဖြစ်သည်။
Previous post လူနာ​သေဆုံးမူနှင့်​ပတ်​သက်​ပြီးထန်တလန်မြို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံအုပ်ကို ပြည်နယ်အဆင့်မှ ခေါ်ယူသတိပေး
Next post ကန့်ကွက်မှုများရှိခဲ့သော်လည်း ဟားခါး GTI ကျောင်းနယ်မြေတွင် ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်ရုံး တည်ဆောက်ရန် အတည်ပြု